Kunyange isu tichigona tese, kune chikamu chikuru, kubvuma kuti zvemukati zvekudyidzana hachisi chinhu "chitsva," kufambira mberi mukushambadzira tekinoroji kwakaita kuti zviratidziro zvemukati zvive zvinonyanya kubatsira kushambadziro yemumwe munhu. Zvizhinji mhando dzezvinhu zvinofambidzana bvumidza mabrand kuti aunganidze huwandu hweruzivo kune vatengi - ruzivo rwunogona kushandiswa kuwana zvirinani kune zvinodiwa nevatengi uye kubatsira nezveramangwana kushambadzira. Chinhu chimwe chete chakashambadzirwa nevashambadzi, zvisinei, kusarudza kuti ndeupi rudzi rweruzivo rwavanoda kuunganidza pamwe nehukama hwavo. Mukupedzisira, inyaya yekupindura uyu mubvunzo wegoridhe: "Ndeapi data evatengi ayo achanyanya kubatsira kune chinangwa chesangano?" Heano mamwe mazano edata revatengi akanyatsonaka kuti utange kuteedzera panguva yako inotevera yekudyidzana zvemukati mekusimudzira: